Mazuva ano izwi nevhidhiyo zvinoita basa rinokosha mukukurukurirana nemiti yakadai seApple's FaceTime. Pasinei nokuti iwe uri mutsva kune tech kana munhu anoshanda kwenguva yakareba, heino zvose zvaunoda kuziva pamusoro pe FaceTime.
Desktop uye kutaurirana kwepabonde pakati pevanhu nemapoka havasati vashoma kumubhadharo wemutauro kunomhanya nokukurumidza nekushambadzira simba. Pamwe nezwi, vhidhiyo ikozvino ine basa rinokosha mukukurukurirana mumiti yakadai se Apple's FaceTime. Mukurusa kwezvose, zvizhinji zvezvigadzirwa izvi zvakasununguka uye zvinongoda Wi-Fi kana kushandiswa kwemasero uye kambani inobatana. Ungave uri mutsva kune FaceTime kana kuti uchida kuziva nezvezvinhu zvazvino, unouya panzvimbo yakarurama.
Chii chiri FaceTime?
Apple yakatanga kuudza FaceTime pamwe ne iPhone 4 mu 2010. Kubva panguva iyo, zvikamu zvakabatanidzwa nemhinduro zvakakura zvikuru. Pamwoyo mavo, FaceTime inobvumira vashandi kuti vataure nemhanzi kana video.
Kubatirana uye Kutsigira
Kana iwe uine iOS kana macOS device, iwe unotokwanisa kuwana FaceTime. Yakange iripo yekusununguka pamadivaysi eIOS kubvira 2010 uye macOS kubva Mac OS X Lion yakatanga mu 2011. Nechepachena, FaceTime inoshanda ne Wi-Fi pane iPhone 4 kana kuti gare gare, iPad Pro (yose mienzaniso), iPad 2 kana kuti gare gare, iPad mini (yose mitero), uye iPod touch 5th chizvarwa kana kuti gare gare. FaceTime pamusoro pepurogiramu yedhara data inotsigirwa pane iPhone 4s kana kuti gare gare, iPad Pro (yose mienzaniso), uye iPad (chizvarwa che 3rd kana gare gare). Unogonawo kushandisa FaceTime Audio pane Apple Watch.
Nehurombo, panguva yekunyora uku, FaceTime haisati yawanikwa kune mamwe mapuratifomu akadai Windows kana Android. FaceTime inoshandisa kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera kuitira kuti chete mutumwa uye anogamuchira ndiye anowana. Sechinhu chekuvanzika, Apple haigone kutsikisa data.
The FaceTime protocol inotsigira mutsara wemabhizimisi akazaruka. Zvisinei, hazvishandi nemitemo yakafanana. FaceTime Audio inotsigira inzwi pamusoro peInternet Protocol (VoIP). Imwe chete inowanikwa chete kuburikidza ne Wi-Fi, FaceTime ikozvino inobatsira masero. FaceTime inoshevedza pamusoro pe Wi-Fi inoda kubudiswa kwebandaneti.
Kushandisa FaceTime paMac
Kuti ushandise FaceTime pane Mac, iwe unoda kambani yekutengesa uye maikorofoni yakagadzirwa kana yakabatana kana kamera.
Kuti uitange, uchada kupinda mukati maMac yako Apple ID.
Shandisa kutsvaga munda pane nechokumusoro nechokuruboshwe rwemapurogiramu ezvo woisa kero ye email kana nhamba yefoni yemunhu waunoda kudana. Kana munhu uyu atova muNotaurira yako, unogona kupinda zita panzvimbo.
Kana wapedza kupinda mumudzidzi ruzivo, enda pane Bhidhiyo Audio kana Vhidhiyo, zvichienderana nezvamunofarira, kutanga nhare yako.
chitsamba: Kushandisa FaceTime nhamba dzenhare paMac, unofanira kunge uri kushandisa imwechete ID ID pakombiyuta yako yose uye iPhone. Ona pasi apa kuti uwane mamwe mashoko.
Kutarisana neTeTime Call Call kuMac
Kana ukagamuchira FaceTime kudana pa Mac yako, uchaona chiziviso chiri kumusoro kwekombiyuta yako.
Iwe unogona Bvuma or Kupera kudanwa. Dzvanya pamusana wepasi pedo pedyo Kugamuchira kana iwe uchida kutaurirana kuburikidza ne FaceTime Audio chete. Dzvanya pamugumo wakadzika pedyo neChipera kutumira shoko kana kuisa chiyeuchidzo kuti utone munhu wacho gare gare.
Gamba FaceTime paMac
Kutanga ne macOS Mojave 10.14.3, unogona kushandisa Group FaceTime kuti utaure nevanhu kusvika ku32 vanhu pa nguva imwechete!
Shandisa kutsvaga munda pane nechokumusoro nechokuruboshwe rwemapurogiramu uye pinda ma kero ye email kana nhare dzevanhu waunoda kudana. Kana munhu uyu atova muNotaurira yako, unogona kupinda zita panzvimbo.
Kuti uwedzere mumwe munhu panguva yekufonera, tora pa sidebar icon, ipapo chengeta +.
Kupindura Gulu FaceTime Call Call kuMac
Pane nzira nhatu dzokubatanidza kana kuderedza Group FaceTime call.
Iwe unogona kuvhara paziso kubva kuMac's Notification Center kana Lock Screen, uye chengeta paunobatanidzwa FaceTime call icon
Bhengai neboka Group FaceTime call kubva pa Messages app
Pinda neboka iri kubva ku FaceTime app kuburikidza nefoni inoshanda
Munguva yeKutsanya Options
Paunenge uchikurukurirana kuburikidza neFreeTime app paMac, unogona kudhonza zviratidzo ku:
Taura / Ununura maikorofoni
Taura / Shandisai vhidhiyo
Ita chiso chako cheTeTime skrini yakazara
Kushandisa FaceTime paIOS Devices
Hazvifaniri kuuya sechishamisika kuti FaceTime yakatanga kubudiswa pa iPhone sezvo ichi ndicho chikwata chakatora mafoni kumusikana, mutsva. Kuti utange ne FaceTime pane imwe yero yako yeIOS, unofanirwa kuve nechokwadi kuti wapinda muApp ID yako.
On iPhone, FaceTime inosungirirwa ku nhamba yako yefoni. Iwe unofanirawo kuwedzera kero imwe kero ye email pa iPhone yako nekupinda muIndaneti yeApps pasi pe FaceTime. Nenzira iyo, vamwe vashandisi veTextTime vanogona kukuwana kuburikidza ne email.
On your iPad kana iPod touch, unogona kuwedzera email yako nekupinda muMapurogiramu app nekusarudza FaceTime> Shandisa yako Apple ID yeFaceTime uye pinda mukati.
Sekutanga kutaurwa pamusoro apa, paunoshandisa FaceTime nhamba dzenhare, unogona kuwana foni inotanga foni pamapuraneti ako ese Apple. Kuti uite kudaro, unofanirwa kunge uri kushandisa iyo imwechete ID ID pane zviyero zvose.
Pane nzira shomanana dzokuita FaceTime kudana paIOS device yako:
Mune app FaceTime pane imwe yero yako yeIOS, tapota + chiratidzo uye chengetedza munhu wacho nhamba yenhare or chikero chetsamba yemumhepo. Zvadaro sarudza Audio or Video, zvichienderana nekuda kwako. Kana munhu uyu atova muNotaurira yako, unogona kupinda zita panzvimbo.
Unogonawo kuisa pane FaceTime icon in the Phone app kuti uchinje foni inoshanda ku FaceTime. Munhu pane imwe mutsara anofanirawo kunge ari pane imwe chinhu inotsigira FaceTime.
Kushandisa FaceTime neChiringo Chimirira
Kana iwe uri pafoni uye FaceTime runosvika, unogona kusarudza kubva pane ipi zvayo yekusarudza:
Gumisai ikozvino kukokwa uye gamuchirai inouya inoshanya
Bvuma iyo inosvika foni uye isai ikozvino kukokwa
Kurambidza kupinda kwaunoita
Gamba FaceTime paIOS
Vhura iyo FaceTime app, uye tapira + pakona yepamusoro-kurudyi.
kupinda zita yevamwari vako, foni nhamba, kana na yevanhu waunoda kumakoka kuboka reboka. Kusvikira ku 32 vanhu vanogona kuva chikamu chekukurukurirana.
pombi Audio or Video kutanga mutambo.
Zvinogona zvakare kushandisa Group FaceTime paIOS kuburikidza neApps app:
Mumashoko, tanga hurukuro yeboka kana kuenda mune imwe hurukuro yeboka iripo.
Tora iyo contactsGoogle pamusoro pehurukuro yeboka.
sarudza FaceTime kutanga nhare yako.
Kupindura Gulu FaceTime Call Call kuIOS
Iwe unogona kubatana neBlue FaceTime call iyo mumwe munhu akazotanga kuburikidza neshoko kana yeboka remutauro.
Sarudza chiziviso kubva kuNotification Center kana kuvharivha Khiya, uye tapota FaceTime icon
Kubva Mharidzo, tapira chiziviso kumusoro kwechiso chako kana pomba Join kubva kuhurukuro yeboka
Kubva paTeTime app, enda kune inoshevedza foni uye tora iyo FaceTime icon
Paunenge uchikurukurirana kuburikidza neFreeTime app paIOS, unogona kudhonza zviratidzo ku:
pombi + kuti awedzere munhu mutsva pamba
pombi pafiripi kuti ichinje pakati pepamberi nekamberi kamera
sarudza Mutauriri kuchinja pakati pemuteve uye mutauri.
sarudza Taura kutsvaga rwiyo / kurega
pombi kamera kuitira kuti vhidhiyo iite / inopera
Zvakadini naAnimoji uye Memoji?
Vaya vanoshandisa iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, kana iPad Pro 11-inch kana iPad Pro 12.9-inch (3rd chizvarwa), inogona kuwedzera unyanzvi kune FaceTime kuburikidza kushandisa Apple animoji chete uye Memoji. Zvose zviri mifananidzo yaunogona kushandisa mune zvose FaceTime uye purogiramu yeMashoko.
Vhura iyo FaceTime app pane yako iOS device yakatsigirwa uye ita call.
Munguva yechirangariro, tora iyo star icon.
Tora iyo Animoji or Memoji iyo iwe unoda kushandisa.
Tora iyo X icon kuti urambe uchitaura usingashandisi unhu, kana kuti udzokere kune FaceTime menu.
Dzokorora Matanho 2 kuburikidza Nhanho 4 kuti uchinje Animoji yako kana Memoji panguva yekufonera.
FaceTime uye Apple Watch
Iyo Apple Watch haina kamera, zvinoreva kuti haugoni kushandisa FaceTime Video pane chipfeki chinopfeka. Zvisinei, unogona kushandisa FaceTime Audio. Paunogamuchira foni kuburikidza ne FaceTime Audio pane Apple Watch:
Tora iyo foni yefoni foni
Kuti ugumise kudana, tapira pa mifananidzo yefodya
Iwe unogonawo kutarisa FaceTime Audio call iko kushandisa App phone paApple Watch.
Kana uri kuwana matambudziko kushandura FaceTime pane ipi zvayo yemapurisa yako, funga nezvemashoko aya ekutambudza.
Iva nechokwadi chekuti unosangana neInternet pachigadzirwa
Tsimbisa kuti wakapinda muApp ID yako
Kana kamera kana maikorofoni isiri kushanda, rega FaceTime, wozozarura zvakare.
Dzorera chimbo chako uye edza zvakare
Iva nechokwadi chokuti mumiriri wako ane kifaa chinotsigira FaceTime.
FaceTime iyi inyanzvi yekukurukurirana kwevashandi veDomputer device. Mune ramangwana, zvichida basa racho richasvika pane zvisiri zveMicrosoft. Unoshandisa FaceTime here? Chii chaunoda kana chisingadi nezvazvo? Regai tizive pasi apa.
New iPhone firmware inogadzirisa odhiyo uye haptic mhinduro nyaya mu iPhone 7
macOS Catalina: Dzazvino Shanduro, Dzidzo, Matambudziko, Kugadzirisa & Zvimiro
Kutevera kweNhare - Kunzwisisa Kunzwisisa kwei, Nei, & Sei
Sei Mac yangu ichitora ma iPhone mafoni angu? Maitiro ekudzima Apple Continuity
Zvakanakisa iPhone zvishandiso 2020: Iyo yekupedzisira inotungamira
Apple iMessage matipi uye manomano: Tenzi iMessage pane iPhone, iPad, Mac uye iPod